Ny lasa tsy fanadino… | NewsMada
Ny lasa tsy fanadino…
Efa mahazatra, satria saika isan’andro mihitsy ny tranga ratsy, ny raharaha maizina, ny afera maloto, sns, voatsinkafona na iniana hapoitra eto amintsika, hoy ny voalaza teto amin’ny « Indraim-bava », omaly. Manampy trotraka ny vaovao ratsy ho an’ny paosin’ny valalabemandry, toy ity fiakaran’ny vidin-tsolika ity.
Na izany aza, misy ihany ny vaovao tokony ho tsara sy hahavelom-bolo. Raha dinihina lalina anefa izy ireny, toa maneho ny tsy fahaizan’ny mpitondra sy ny fitaka tsy misy fetra, ialokalofany mba hitazonany ny sezany. Nekeny, ohatra, ny olana amin’ny tsy fandriampahalemana. Ny mahavariana, ny nanitrikitrihany fa tsy resabe na kobaka am-bava « intsony » ny fitadiavana paikady hiadiana amin’izany.
Midika ve izany fa na izy mpitondra aza, miaiky fa fampandriana adrisa sy kabary ambony vavahady fotsiny izay nambarany hatramin’izay ? Raha efa zava-panaony ny fampanantenana poak’aty, ataon’ny vahoaka ahoana ny hamerina indray ny fahatokisany azy, indrindra amin’izao fifidianana mihaantomotra izao ?
Mikasika izay fifidianana izay indrindra, toa mitady hanao fahagagana ny mpitondra ankehitriny, mieritreritra ny hampanadino sy hamafa haingana ao an-tsain’ny mpifidy ny ratsy vitany sy ny tsara tokony ho nataony, saingy tsy notanterahiny. Ny lasa tsy fanadino, toy ny hoe delestazy nampanantenaina fa ho foana ao anatin’ny telo volana, kinanjo, vidin-jiro midangana no notatazan’ny vahoaka. Na inona na inona fanazavana, midika ho tsy fahaizana ny tsy fahatanterahana ny teny nomena.
Mbola « tantara ratsy » nampalaza ity fitondrana ity ary tsy maintsy hotsaroan’ny mpifidy koa ny kolikoly amin’ny endriny samihafa, nahavoarohirohy olona ambony na/sy malaza eto amin’ny firenena. Rehefa nisy ireny zavatra rehetra ireny, misy hatrany ny fanadiovan-tena, ny fanilihana ireo « mandoto rano ». Ny tsy tokony hadinoin’ny mpitondra anefa dia ity, tsy adala ny vahoaka ary ny lasa tsy fanadino.